Dar dargelinta arrimaha xaquuqda aadanaha Soomaaliya oo laga hadlay – Radio Muqdisho
Siihayaha Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta xuquuqul insaanka ayaa maanta xafiiska ku qaabishay wafdi dhinaca xuquuqda aadanaha oo ka socda Qaramada Midoobay kuwaasi oo soo gaaray Muqdisho.
Wafdiga oo uu hogaaminayay Bahame Tom Mukirya Nyanduga oo ah qabiirka madaxa banaan ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa waxa ay uga wada hadleen waxyaabaha u qabsoomay Wasaaradda ee ku aadan xagga xuquuqul insaanka iyo kuwa kale, waxaana kulanka goob joog ka ahaa ku-simaha madaxa xuquuqda aadanaha ee xafiiska Qaramada Midoobay UNSOM.
Bahame Tom Mukirya Nyanduga ayaa sheegay in maanta waxyaabaha kulankan ka soo baxay ay ka mid yihiin sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta ka dhexeyso dowladda iyo hay’adaha xuquuqda aadanaha qaabilsan, si loo horumariyo xuquuqda aadanaha Soomaaliya.
“Saaka waxaan kulan la qaadanayay Wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda Aadanaha Soomaaliya, waxaan kala hadalnay arrimo badan oo ay ka mid yihiin arimaha xuquuqda aadanaha Soomaaliya, qorshe ay Wasaaradda ugu talagashay xuquuqul insaanka iyo waxyaabihii arrimahaasi uga qabsoomay” ayuu yiri Mr Bahame.
Marwo Khadiija Maxamed Diiriye sii hayaha Wasiirka Wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Soomaaliya ayaa tilmaamtay in wafdigan ay isla meel dhigeen meel marinta sharuucda ay Wasaaradda ka diyaarisay xuquuqda aadanaha.